မိုးကောင်းကင် - မိန်းမတွေရဲ့စိတ်
=> နေ့ စဉ်သုံး မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် ဘာသာစကား
=> ပြုံးရုံ ပဲ ပြုံးပါ
=> ရှိခြင်း မရှိခြင်း ၁၁ ချက်
=> A to Z Love
=> သို့ အချစ်လေး
မိန်းကလေးတွေရဲ့ စိတ်ဟာ ဒီလိုသဘောမျိုးတွေရှိတာများပါတယ်နော်.....
If you kiss her, you are not gentlemen
မနမ်းတဲ့အခါ... သင်ဟာ ယောင်္ကျားမဟုတ်
နမ်းလိုက်ပါ။ လူကြီးလူကောင်းမဆန်သူလို့ ပြောလာခဲ့ရင် နောက်ဘယ်တော့မှ မနမ်းတော့ပါဘူးလို့ပြောပြီး ကတိတည်လိုက်ပါ။ သူကစပြီး ပြန်နမ်းလာတာမျိုး ကြုံလာရင် သင်ဟာ မိန်းဖြစ်ပြီး မိန်းမ မပီသအောင်နေသူ လို့ ပြောကြည့်လိုက်ပါ။
မချီးကျူးပဲနေပြန်တော့... သင်ဟာ အသုံးမကျတဲ့သူ...
ချီးကျူးစရာ ကြုံရင် ချီးကျူးရမှာလားလို့ မေးလိုက်ပါ။
If you don't you are not understanding
ကြားချပြီး တစ်ဝက်ပဲ သဘောတူပါ။ ကျန်တာ မှန်မှန် မမှန်မှန် ဘု ဘူ ဘူး လုပ်လိုက်။
သူဆီကိုသင်မကြာခဏအလည်သွားရင်... သူစိတ်ထဲမှာ ပျင်းစရာလို့ထင်တယ်...
မသွားပြန်ရင်တော့... အပြင်မှာခြေရှုပ်နေတယ်လို့ သင်ကိုစွတ်စွဲလိမ့်မယ်...
တစ်ပတ်မှာ ဘယ်နှစ်ခါလာရမလဲ အရင်မေးကြည့်ပြီးမှ သွားပါ။
သင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဝတ်စားထားရင်... သင်ဟာ စတိုင်များသူလို့ သူပြောမယ်
မ၀တ်စားပြန်တော့... သင်ဟာ ခပ်တုံးတုံးကောင်
ဒါမျိုးထင်ခဲ့ရင် ရှေ့တစ်ခြမ်းကို ကောင်းတာဝတ်ပြီး နောက်တစ်ခြမ်းကို စုတ်ပြတ်နေအောင် ၀တ်ပြလိုက်ပါ။ (ခောတ်လွန် စတိုင်)
မှတ်ချက် ။ ။ ကမ္ဘာဦးစတိုင်တော့ မ၀တ်မိပါစေနဲ့ ၊ အအေးမိပြီး ဖျားမှာ စိုးရိမ်ရပါသည်။ ပြီးတော့ နောက်က ခွေးတစ်စီစီ ရန်ကိုလည်း ကြောက်ရပါသည်။
သင်က မနာလိုအူတိုဖြစ်ခဲ့ရင်... အဲဒါမကောင်းဘူးလုိ့ သူပြောမယ်...
If you don't, she thinks you don't love her
အလိုမဖြစ်ပြန်တော့... သင် သူ့ကိုမချစ်တော့ဘူးလို့ ထင်မယ်
အူတိုတယ် မထင်ရအောင် အူတွေ ထုတ်ပြလိုက်ပါ။ ခြစ်ကြောင်း သက်သေပြတဲ့အနေနဲ့ သူမတစ်ကိုယ်လုံးကို အုန်းသီးခြစ်နဲ့ ခြစ်လိုက်ပေါ့။
သင်ကချစ်လို့တီတီတာတာလုပ်ရင်... သင်ကသူ့ကိုမလေးမစားလုပ်ပါတယ်လို့ ပြောမယ်..
If you don't, she thinks you don't like her
မလုပ်ပြန်တော့... သင်ကသူ့ကိုမကြိုက်ဘူးလို့ ထင်မယ်...
တီတီတာတာ မလုပ်နဲ့ ။ ကားကြီးတွေမှာပါတဲ့ အဲယားဟွန်းကို နှိပ် ။ ဗွမ် ဗွမ် တော် တော် ဗွမ် ။
သင်ကသူ့ကိုတော်တော်ကြာကြာနေမှတခါလောက်နမ်းရင်... သင်ဟာ သူနဲ့ပက်သက်ရင်သွေးအေးလွန်းတယ်ပြောမယ်..
ခဏခဏနမ်းပြန်တော့... သင်ဟာအခွင့်အရေးယူနေတယ်လို့ သူမအော်တတ်နေမယ်..
ခဏခဏ လေကိုပဲ နမ်းဟန်ပြပါ။ နှာစီးနေတယ်ထင်ပြီး ဆေးတိုက်ပါလိမ့်မယ် ။
သူလမ်းကူးတဲ့အခါမှ သင်ကကူညီပေးဖို့ပေါ့လျော့ခဲ့ရင်... သင်ဟာ ယဉ်ကျေးမူမရှိသူ...
အလိုကူညီပြန်တော့.. ဒါဟာယောင်္ကျားမာယာတမျိုးလို့ သူမထင်မယ်...
အဲလိုထင်ခဲ့ရင် မကူညီရင်လည်း ထင်ဦးမယ် ။ ကူညီပြန်ရင်လည်း ယောင်္ကျားမာယာတဲ့ ။ ယောင်္ကျားမာယာ မသုံးပါဘူး။ ဒို့ကတော့ ပေါ်တင်ပဲ ။ ဒီတော့ သူမ လမ်းကူးတဲ့အခါ ဟိုဖက် ပလက်ဖောင်း မြန်မြန်ရောက်အောင် သိပ်ပြီးတော့လည်း သူမအနီး ကပ်ချင်တယ်လို့ မထင်အောင် ခပ်ခွာခွာလေးကနေပြီး ဆောင့်တွန်းလိုက်ပါ။ အဓိကက အထင်မခံရဖို့ပဲ မဟုတ်လား။
မှတ်ချက် ( ဟိုဖက်ပလက်ဖောင်းကိုတော့ အပြေးလိုက်သွားနော် ပလက်ဖောင်းဘေးက မြောင်းဖုံးပေါက်နေလို့ မြောင်းထဲကို ခေါင်းစိုက်ပြီး ဟိုဟာရှာသလို ဒီဟာရှာသလိုနဲ့ ကုန်းကုန်းကွကွကြီး ယက်ကန်ယက်ကန် ဖြစ်နေမယ့် သူမကို ခြေသလုံးကကိုင်ပြီး ဆွဲထုတ်ဖို့ )
သင်ကတခြားသူကိုငေးမိ၇င်... သင့်ကိုဖွန်ကြောင်တယ်လို့ စွတ်စွဲမယ်
သူမကိုတခြားသူကငေးမိရင်တော့... လေးစားလို့ကြည့်တာပါလို့ ပြောမယ်...
လေးစားတာဟုတ်လောက်ဘူး ။ လေးပြုတ်ပြီး စားချင်လို့ ကြည့်တာ ဒဓိထား ။ ဒါကိုတော့ သူမ သိဘူး။ သူမစိတ်ထဲမှာ ကြည်နူးပျော်ရွှင် ၀မ်းသာစွာနဲ့ တယ်လှတဲ့ ငါပါလားဆိုပြီး မာနကလေးက တက်လိမ့်ဦးမယ် ( ဒူးနဲ့ မျက်ရည် မသုတ်ရသေးခင်ပေါ့ )။
If she talks, she wants you to listen
သူမစကားပြောတဲ့အခါ ... သင့်ကိုနားထောင်စေချင်တယ်...
သင်နားထောင်တဲ့အခါ... သင်ကို စကားပြောစေချင်ပြန်ရော...
သူမကြိုက်သလောက်ပြော 20 လီတာ ရေဗူးကြီးချပေးလိုက်။ အကြာကြီးပြောပါစေ။ ကိုယ်နားပူရင် သူမ မသိအောင် ဂွမ်းဆို့ပြီး အင်း အင်း ပြောပြီး ရီကောဒင်းလုပ်ထား( မကောင်းကြောင်းပြောရင် ကိုယ်သိအောင်လို့ ) ။ ကိုယ့်ကို ပြောစေချင်ပြန်ရင် ကိုယ် အာသီးယောင်နေတယ် နှာစေး ချောင်းဆိုးဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဗျာ။ ပါးစပ်ထဲလည်း ဖြဲမကြည့်လောက်ပါဘူး။ မယုံလို့ မျက်နာနားကပ်လာပြီး ဖြဲကြည့်ရင် ဟတ်ချိုးပစ်လိုက်။
So confusing, yet so desirable ... women!
စိတ်ရှုပ်စရာကောင်းသလောက် သဘောကျစရာကောင်းသူ... မိန်းမ !!!!
အဲဒါပြောတာပေါ့ ဣတ္တိယဟူ မိန်းမတို့သည် မရှိလည်းကောင်း ရှိလည်းကောင်းတဲ့ ။ တစ်ယောက်ကလေးမှ မယူနဲ့ ( ကိုယ်မှာ ငွေမရှိရင်) ။
ယူပါ ( ငွေပေါရင် သက်စေ့ )
Today, there have been 1 visitors (44 hits) on this page!